ब्लग-टिपिंग: SR Coley | Martech Zone
ब्लग-टिपिंग: SR Coley
शुक्रबार, जुलाई 6, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो विशेष हो! स्टीफन राम्रो साथी हो मेरो छोरो, बिलको। स्टीफन एक महान मान्छे हो - धेरै बुद्धिमान, धेरै जिज्ञासु, र अविश्वसनीय बिरामी। मलाई थाहा छ जब उसले मलाई एक प्रश्नको लागि बोलाउँछ ऊ शायद रातमा निद्रामा परेको छ त्यसैले म उसलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्छु।
स्तिफनसको ब्लग अर्को वर्ष मा धेरै चाखलाग्दो हुन सक्छ उनी जर्मनीको यात्रामा। जर्मनी वास्तवमा यसको लागि परिचित छ कमी ब्लगर्स को। यो कुनै डरलाग्दो कुरा होइन - केवल सांस्कृतिक रूपमा, यो देश मिडिया बाहिर सामाजिक हुन र सामाजिक मिडियाको निजी भित्र। यो सम्भवतः अमेरिका र एशियाको लागि सिक्नको लागि उत्तम पाठ हो ... हामी उनीहरूलाई ईमेल गर्नुको सट्टा कोठाबाट पाठ पठाउँनेछौं वा ईमेल गर्ने छौं!
स्तिफनस, मँ साँच्चै तपाईको ब्लग कती रूमलो छ मन पर्छ। शैली धेरै स्वच्छ छ। तपाई राम्री शान्त मान्छे हुनुहुन्छ तर मलाई थाहा छ तपाईसंग अर्को पक्ष पनि छ। मैले यसलाई तपाईंको ठूलो गेज छेड्ने काममा देख्छु र तपाईं सुन्नुहुन्छ कन्फिगर गर्नुहोस्! यदि तपाईंले तपाईंको तस्वीर हटाउनु भयो भने, म कहिल्यै कल्पना गर्दिनँ कि तपाईंले ती छेड्नुभयो। मलाई आश्चर्य छ कि तपाईं कसरी यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको साइटलाई साकार गर्नको लागि मान्छेहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईं शान्त, प्रीमेडेटेड साइड हुनुहुन्छ। र एक रचनात्मक (चिच्याउँदै?) छेउमा। 🙂
हेडर पृष्ठभूमि छविमा सायद कुनै प्रकारको सजावट छ? यस पृष्ठभूमि छवि पाउन्समा जाँच गर्नुहोस्:
केहि त्यस्तो काम मनपर्दछ? पृष्ठभूमिमा कतै हल्का?
केवल एक व्यक्तिगत प्राथमिकता, तर म Digg मार्कर बाहिर निकाल्छु। तिनीहरू राम्रा फिट छन्, तर तपाईं पृष्ठहरू र हंस अण्डा (शुन्य) को पृष्ठहरू छ। मलाई लाग्छ कि यो तपाईंको पोष्टहरूबाट टाढा लिन्छ यसले थप गर्दछ हुनसक्छ तपाईले केहि जादू चलाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई ० मा लुकाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई १ भन्दा ठूलो भएको बेलामा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ? श्रेणीकरण र तथ्या Showing्क देखाउँदै पाठकहरूलाई बोध हुन्छ कि ब्लग वा पोष्ट महत्त्वपूर्ण छ। तर कम श्रेणीकरण वा तथ्या !्कहरू पाउँदा वास्तवमा व्यक्तिले पढ्न वा सदस्यता लिनबाट वञ्चित गर्न सक्दछन्।
मैले यो प्लगइन अर्कोमा उल्लेख गरें टिपिंग: मान्छे वरिपरि राख्न, म सिफारिस गर्दछु सम्बन्धित पोस्ट प्लगइन र सम्बन्धित पोस्टहरू तपाइँको पोष्टहरूको प्रत्येकको तल राख्नुहोस्। यस तरीकाले व्यक्तिहरूले तपाईंलाई सर्च ईन्जिनको माध्यमले फेला पार्दछ तपाईंको पोष्टहरू पढ्दछन् र यदि उनीहरूले वास्तवमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा फेला पार्दैनन् भने तिनीहरू समान लेखमा थप लेखहरू खोज्न सक्छन्। यसले पनि सहयोग पुर्‍याउँछ गहिरो सम्बन्ध खोज इञ्जिन श्रेणीकरण को लागी।
छविहरूको साथ तपाईंको पोष्टहरू भिन्न गर्नुहोस्। पोष्टहरूमा छविहरूले पाठकहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछन् - विशेष गरी यदि तिनीहरू फिडमार्फत सदस्यता लिएका छन्। राम्रो चित्र वा क्लिपार्टको टुक्रा फेला पार्न र यसलाई ब्लग पोष्टको साथ पोष्टिंगको समस्याबाट पार गर्नुहोस्। म विशेष गरी तपाईंको मस्ट डाउनलोड पोष्टहरूमा यो गर्दछु! सफ्टवेयरको स्क्रिनसट वा लोगोले कसैको ध्यानाकर्षण गर्दछ। तपाईं आफ्नो ब्लग पोष्ट शीर्षकको फन्ट-वेट अप क्र्या to्क गर्न चाहानुहुन्छ त्यसैले उनीहरू थोरै भारी खडा हुन सक्छन्। जब म तपाईंको पृष्ठ स्क्यान गर्दछु, म शिर्षकहरूमा स्क्यान गर्दैछु (हुनसक्छ त्यो मात्र म हो!)
ओह - र मैले फिक्स गर्न सजिलो त्रुटि भेट्टाएँ - तपाईंको रोबोट्स। txt फाईल अवस्थित नभएको साईटम्यापलाई देखाउँदै। शुभ समाचार यो छ कि तपाईंसँग साइटम्याप छ! नराम्रो खबर यो हो कि गुगलले तपाईंको साइटलाई कुशलता बिना क्रल गर्न नसकेको हुन सक्छ।
एउटा अन्तिम कुरा ... केहि लिंकमा गडबडी भएको जस्तो तपाईले राख्नु भएको पोष्टमा देखिन्छ। कहिलेकाँही जब तपाईं HTML बाट कोड प्रतिलिपि गर्नुहुन्छ यो गडबडी हुन्छ।
मजा लिनुहोस्, स्टीफन! मैले वास्तवमै कडा हेर्नुपर्‍यो र तपाईंको साइटको आलोचनात्मक हुनुपर्‍यो। तपाईं राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ!
टैग: पृष्ठभूमि छविकोलीखन्नुजोड्नुसम्बन्धित पोष्टहरूरोबोटsrcoleyस्टीफन कोली
ब्लग-टिपिंग: PGA- लिलामी
धन्यवाद एक टन डग! मैले मेरो पोस्टमा लिङ्क फिक्स गरें। यो उद्धरण चिन्ह संग केहि गर्न को लागी थियो।
जे भए पनि, म तपाईंको आलोचनाको लागि धेरै आभारी छु। तपाईंले याद गर्नुभएको होला कि मेरो ब्लगमा हालसालै धेरै सामग्री भएको छैन, तर अब मसँग यी सबै कामहरू छन्, यसले मलाई ट्र्याकमा फिर्ता ल्याउनु पर्छ। फेरि पनि धन्यबाद। म मेरो ब्लग अरू कसैले टिपोस् भन्ने चाहन्न।
धन्यवाद स्टीफन! तपाईंले साँच्चै पूर्ण गतिमा गेटहरूबाट हाम फाल्नुभयो।